IYunivesithi yaseVanderbilt (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Amy Jacobson
E-Nashville, eTennessee, iYunivesithi yaseVanderbilt yindawo ehloniphekileyo neyaziwayo. Iindaba ze-US kunye neNgxelo yehlabathi inika iVanderbilt amanqaku aphakamileyo kumgangatho wayo jikelele kunye nexabiso layo. Ngezikolo ezili-10 ezigqwesileyo kunye nezikolo ze-grade-grade, iVanderbilt inikeza uluhlu olubanzi lwabafundi be-bachelor's, masters, kunye noogqirha. Njengeyunivesiti yokuhlala yokuhlala malunga nabafundi abayi-13 000, akumangalisi ukuba iVanderbilt ineehholo zokuhlala ezingama-37 kunye neendawo zokuhlala, kunye nezindlu ezingama-26 kunye nobuqili. I-campus yakha ikhaya lokwakhiwa kwezakhiwo kunye neentyatyambo, njengoko kuboniswe apha yiBenson Old Building Building. Enye yezakhiwo ezindala kwi-campus, i-Benson Old Central ihlala kwisebe leNgesi kunye neMbali.
Ukuba ufuna ukwazi kabanzi malunga neVanderbilt, khangela iprofayili yokuvuma esikolweni apha kwi-About.com, kunye ne-website yaseburhulumenteni yaseVanderbilt.
Isiko soBomi beBafundi
Isiko soBomi se-Student kwiYunivesithi yaseVanderbilt (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Amy Jacobson
Nabani na onomdla wokujoyina enye yeeklasi ze-300+ zemfundo kunye nemibutho kwi-campus kufuneka imiswe yiZiko loBomi beBafundi. Kulapho uzakufumana i-Ofisi yeeNgcebiso zoLwazi lwezeMpilo, i-Ofisi yeeNkqubo eziPhandle, i-Ofisi yeeNkonzo zamazwe ngamazwe, iZiko loLuntu, iNkonzo yabaHlabathi bamaZwe kunye neeScholar, kunye ne-Ofisi yoHloniphelo lweeScholarships kunye ne-ENGAGE, kunye ne-9000 square square- ibhola lebhola leenyawo.
Centre Arts Arts
I-Studio Arts Centre kwiVunivesithi yaseVanderbilt (nqakraza isithombe ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Amy Jacobson
Ingaba ukhetha ukupenda, ii-ceramics, okanye ubugcisa bekhomputha, uya kufumana i studio enkulu kwi-E. Bronson Ingram Studio Arts Centre. Eyakhelwe ngo-2005, esi sakhiwo sinika indawo yokudala yabaculi kwiindidi ezahlukeneyo. Iqulethe iindawo zokuphanda, iiofisi zee-faculty, kunye neendawo zangaphandle zendawo yegalari.
Ukufumana udidi lwezobugcisa obuhlobisa i-campus yaseVanderbilt, jonga kwiwebhusayithi yeVanderbilt Outdoor Sculpture Tour.
I-Vanderbilt Law School (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Amy Jacobson
I-Vanderbilt Law School inika iidridi kwi-master, i-JD kunye ne-PhD. Umthetho wokwakha izindlu zeeklasi, indawo zokufunda, i-coffee and lounge, ibhodi yekhomputha, i-auditorium, kunye netyala leenkundla eziphezulu zobuchwepheshe. Ukungathethi, i- US News ne-World Report ibeke i-Vanderbilt yesi-16 kwiZikolo zoMthetho.
I-Keck ye-Free-Electron Laser Centre
I-Keck ye-Free-Electron I-Laser Centre eVanderbilt (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Amy Jacobson
I-Wander Kilt ye-WM Keck i-Free-Electron iLaser Centre inokubamba isicatshulwa esinqabileyo nesiyingqayizivele yophando lwezenzululwazi - i-laser-electron laser. Le laser iyisitimu se-state-of-art esingenza izixhobo zamatye e-laser kwiindawo ezininzi kunye nobuchule bamandla. Kukho ezimbalwa ii-lasers ezikhoyo kwaye ziqhutywa yiiyunivesithi zase-US.
I-McTyeire International House eYunivesithi yaseVanderbilt (nqakraza ifoto ukunyusa). I-Credit Credit: Amy Jacobson
Abafundi abaninzi abavela ngaphakathi nangaphandle kwelizwe bayabiza i-McTyeire International House ikhaya labo. Isakhiwo senzelwe ukunceda abafundi bafunde iilwimi zangaphandle ngokuqhagamshelana nabafundi bamazwe ngamazwe kunye ne-faculty. Eyakhelwe ngowe-1940, indlu ye-gothic isinegumbi lokudlela elandisiweyo kunye nelayibrari yolwimi.
Delta Delta Delta i-sorority house
Delta Delta Delta Sorority eYunivesithi yaseVanderbilt (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Amy Jacobson
Indlu yaseDelta Delta yaseDalta iyinxalenye yezindlu ezingama-26 zaseGrisi kwi-campus. UVanderbilt unamaqela angama-34 kunye nobutyebi, malunga ne-42% yabafundi abaphumelele kwi-Life Life. Abantu baseGrike eVanderbilt badla ngokuthatha inxaxheba kwinkonzo yoluntu kunye neminye imisebenzi yentlalontle.
I-Furman Hall eYunivesithi yaseVanderbilt (cofa isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Amy Jacobson
I-style ye-gothic yaseFurman Hall yavulwa ngo-1907 njengokhemistri kunye nesakhiwo sekhemisti, kodwa kamva yabuyiselwa kwakhona eklasini yabantu. I-Furman ngoku igcina iinkqubo zezifundo zakudala, ifilosofi, iilwimi zasemzini, kunye neZifundo zaBafazi. Kukho isicwangciso sokwakha seFurman Hall ukuhlaziywa kwamagumbi okufundela kunye neelabhu.
Button Hall eYunivesithi yaseVanderbilt (nqakraza isithombe ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Amy Jacobson
I-90,000-square-foot-foot Button Hall inomsebenzi omncinci wezinto zonke: amagumbi okufundela, iiofisi, amagumbi okufundisa kunye nendawo yenkomfa. Kodwa iHottrick isanda kutshintsha ukusuka kwi-halogen i-bulbs ukuya kuma-bulbs e-LED, angasebenzisi kuphela amandla angancinci kwiyunivesithi kodwa ikulungele ukusingqongileyo, ukunciphisa i-Vanderbilt ye-greenhouse emissions nge-tani ezingama-34 ngonyaka.
I-Vanderbilt School of Engineering (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Amy Jacobson
IYunivesithi yaseVanderbilt inikeza i-bachelor's, i-master's, kunye nogqirha kwiiyunjineli. ISikole soBunjineli ihamba kakuhle kwi- US News & World Report , kwaye abafundi abayi-1,300 bangakhetha kwiinkalo zobunjineli ezahlukeneyo: Ubunjineli boBunjineli, iiMichiza kunye neBilolecular Engineering, Ubunjineli boLuntu kunye noBume bendalo, Ubunjineli boMbane kunye neNzululwazi yeeKhompyutha, iiNjineli zobungcali , kunye nomfundi onomdla kwimfundo engekho emthethweni, kwiNjineli yobunjineli.
IHolhoun iHolo eYunivesithi yaseVanderbilt (cofa isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Amy Jacobson
Iiprogram zeVanderbilt zoQoqosho, iNzululwazi yezopolitiko kunye noThishino loNxibelelwano zifumaneka kwiHolo yaseCalun. Ukongeza, iyunivesithi yenza izicwangciso kwindawo yokulungisa kwakhona uCalun ukufaka iiofisi zesebe zeMpilo, uMbutho kunye neMicrothe. Isakhiwo sakhiwe ngowe-1928 kwaye sanda ngowe-1993, kwaye sihlala omnye umzekelo wezakhiwo ze-gothic zakhiwo zaseVanderbilt ezindala.
Kirkland Hall eYunivesithi yaseVanderbilt (cofa isithombe ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Amy Jacobson
I-Kirkland Hall iye yajikeleza ukususela ngoVanderbilt yavulwa ngo-1875. Ekuqaleni isakhiwo sase-Old Main, i-Kirkland Hall iye yaba ngumlilo, ukwakhiwa kabusha nokulungiswa. Okwangoku, i-Kirkland iphethe iiofisi zamagosa aqhelekileyo, iidolophu zeKholeji yoBugcisa neSayensi kunye neSikolo seSikolo soMgqibelo, abalawuli kunye ne-chancellor. Kukwa-2,000-lb. nentsimbi yebhedu, ehlawulwa ngabafundi besikolo saseNashville abaphakamisa imali yokubuyisela insimbi yokuqala eyayilahlekelwe ngumlilo.
Tolman Hall kwiYunivesithi yaseVanderbilt (cofa isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Amy Jacobson
Yakhiwe kungekudala emva kweMfazwe Yehlabathi II, iTolman Hall yenye yeehholo ezingama-37 kunye neendawo zokuhlala kwi-campus. I-Tolman iyindlu yokuhlala yokuhlala ye-upperclassman yaye ihlaziywe kutshanje. Ixhasa abafundi abangama-102 kumagumbi angabodwa nabini. Isakhiwo sakha indlu yokuhlala.
IWest Hall kwiYunivesithi yaseVanderbilt (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Amy Jacobson
I-Wyatt Centre ibonisa amaphiko amabini okulala, iWest Hall ne-East hall. Nangona bobabili babakhiwe ngawo-1920, bahlaziywa ngo-1987. IHolo leNtshona Koloni liquka igumbi elinjongo, iikhikhini, kunye nendawo yokuhlamba impahla / yokufunda.
ICarmichael Towers kwiYunivesithi yaseVanderbilt (nqakraza isithombe ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Amy Jacobson
Izakhiwo ezide kunazo zonke zeVanderbilt yiCarmichael Towers, iiholide zokuhlala ezimbini eziphakamileyo. I-Towers ifaka i-1,200 abafundi abafundele i-grade-grade. Ngaloo ndawo kwi-campus, akumangalisi ukuba iVanderbilt inamandla okwenza abafundi abangama-5 500. I-Towers ineeplanga elinesine elinesibini kwaye iqulethe iindawo zokuhlala ezihamba phambili.
IHolo leeRandi kwiYunivesithi yaseVanderbilt (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Amy Jacobson
IHolo leRandi likhonza njengendawo yokudibana kwabafundi kunye ne-faculty yaseVanderbilt. Kwakhona iphethe isitoreji sencwadi yaseyunivesithi, indawo ye-Market Avenues Market, kunye ne-Station B Post Office. IRandi isanda kuvulwa kwakhona emva kokuvalwa kweenyanga eziyisixhenxe ukwenzela ukulungiswa okukhulu, kwaye ngoku inendawo entsha yokutya ebizwa ngokuba yiPi neLeaf neRe (umjikelezo)
Isikolo seSarratt yabafundi
Isikolo se-Sarratt yabafundi kwiYunivesithi yaseVanderbilt (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Amy Jacobson
Ngakwesokudla ngaseRandi Hall yiziko le-Student Centre likaSarratt, eliya kumxube weevenkile ezahlukeneyo, amaziko kunye nezinto zokuzonwabisa. Kukho igalari yeSarrat, i-Baseball Glove Lounge, i-Sarratt Art Studios, i-Restaurant yePub, i-Caribbean yeSarratt kunye neofisi ze-Vanderbilt yoNxibelelwano lwabafundi. Njengezakhiwo ezininzi kwi-campus, uSarratt usandul 'ukulungiswa.
I-Neely Auditorium kwiYunivesithi yaseVanderbilt (nqakraza ifoto ukunyusa). I-Credit Credit: Amy Jacobson
I-Vanderbilt iYunivesithi yeTheyibrari iyaziqhenya ngekhaya layo kwi-Neely Auditorium. Ukuchazwa nguVanderbilt ngokuthi "ochanekileyo," i-Neely Auditorium yindawo enkulu kuyo nayiphi na iindidi zeemveliso zentengiso. Isakhiwo esiza kulungiswa ngokukhawuleza sinexesha elidlulileyo kunye nesiganeko, ongayifunda ngakumbi ngokujonga kwi-website ye-Neely Auditorium.
ISikhumbuzo seGymnasium eYunivesithi yaseVanderbilt (cofa isithombe ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Amy Jacobson
Eyakhelwe ngo-1952, iSikhumbuzo iGymnasium yaseVanderbilt yindlu yeqela lebhola lebhola le-Commodore. I-Gym yeSym Memorial ihlala malunga nama-14 000, ngelixa iVanderbilt Stadium zihlala malunga nama-40,000. Iyunivesithi inikezela imidlalo ye-varityity, njengegalufa lamadoda kunye nelabasetyhini, ilizwe eliphambeneyo kunye ne-tennis. UVanderbilt ukhuphisana kwiCandelo le-NCAA I- Southeastern Conference kunye neNkomfa yase -American Lacrosse.
I-SAT Score Ukuthelekiswa kweeNyuvesi zeSibini
Amanqaku omsebenzi Ukuthelekiswa kweeNyuvesi zeSibini
I-Campus Art kwiYunivesithi yaseVanderbilt (nqakraza ifoto ukunyusa). I-Credit Credit: Amy Jacobson
I-campus yase-Vanderbilt i-330-ekre iqukethe iintlobo ezingaphezu kwama-300 zemithi kunye nezihlahla, kwaye yonyulwe i-arboretum yesizwe ngo-1988. Oku kuyingxenye ngenxa yomsebenzi we-Vanderbilt wesine-nkosikazi we-chancellor, uMargaret Branscomb. UNksz Branscomb wema njengomongameli weVanderbilt Garden Club ngo-1952, ecwangcisa izicwangciso zokunyusa imithi kwi-Vanderbilt landscape. Umfanekiso wakhe wobhedu wawubekwe kwi-campus ngo-1985.
Amanqaku afana neVanderbilt yunivesithi:
Iprofayili ye-Admissions ye-University yeVanderbilt
GPA, SAT kunye ne-ACT Graph kwiVyunives University
IiYunivesithi eziPhambili eziPhambili
Iikholeji eziphezulu zeTennessee neeYunivesithi
I-French Revolution: I-1780s Crisis kunye neZibangela ze-Revolution
U-King Agamemnon wamaGrike wafa njani?
Indlela yokugcina iBhakeki yakho - Yilungiselele ukugcinwa kwexesha elide
10 Amanqaku Ngombhali noMbonisi uPatricia Polacco
ICandelo leNCAA I-Champions
Indlela yokudibanisa iLwimi elithi "Conoscere" ngesiTaliyane
IiCrionary Arteries kunye neeNtsholongwane zeNtliziyo
Igalari yeCoffered Ceilings
I-Phantom yeSikitori sokuMisa
Top James Madison Quotes kwiNkolo
Ngaba ii-Movie zeBlockbuster zineNqabileyo ye-Oscars?
I-Fortune yakho njengeJupiter Transits iiHososcope izindlu
Ukutshatyalaliswa kweNyanga kuGemini
1963 I-Split-Window Corvette Coupe
Ukuqonda iNkqubo yokuBala kwiRodeos